कहिले र किन बन्द हुँदैछन् यी ५ स्कुटर ? | Automotive News Nepal
कहिले र किन बन्द हुँदैछन् यी ५ स्कुटर ? २८ चैत, २०७६
१ अप्रिल देखि बीएस ६ एमिसन नर्म्स लागू भए पछि अटोमोबाइल कम्पनीहरुको प्रडक्ट पोर्टफोलियोमा केही परिवर्तन गरिएको छ । धेरै भारतीय कम्पनीले अधिकांश प्रोडक्ट एमिसन नर्म्स अनुरुप परिवर्तन गरेका छन् भने केही बन्द गरेका छन् । यी ५ स्कुटरको उत्पादन अब बन्द हुने भएको छ ।
होन्डाको सो स्टाइलिश स्कुटर युवाहरुलाई ध्यानमा राखेर बजारमा पेश गरिएको थियो । तर सो स्कुटरले खासै युवाहरुलाई आकर्षित गर्न सकेन । यसमा १२५ सीसीको इन्जिन समावेश छ । सो स्कुटर फुल डिजिटल इन्स्ट्रयुमेन्ट प्यानलको साथमा उपलब्ध थियो । सोचे जस्तो बिक्री हुन नसके पछि कम्पनीले सो स्कुटर बीएस ६ मा अपग्रेड गरेको छैन ।
होन्डाले नाभीलाई स्कुटर र बाइकको बीचको अप्सनको रुपमा लन्च गरेको थियो । यो कम मूल्यको टु ह्विलर थियो । शुरुवातमा सो स्कुटरलाई राम्रो प्रतिक्रिया मिलेको थियो । तर पछि यस्तो बिक्रीमा सुस्ती आउन थाल्यो । बीएस ६ लागू भए पछि होन्डाको सो स्कुटर बन्द गर्दैछ ।
हिरो माइस्ट्रो एज ११०
हिरो मोटोकर्पले सो स्कुटर बन्द गरेको छ । कम्पनीले यसलाई वेबसाइटबाट पनि हटाएको छ । सो स्कुटरलाई माइस्ट्रो एज १२५ ले रिप्लेस गरेको छ ।
महिन्द्रा गस्टोको सो सेगमेन्टमा सबैभन्दा लेटेस्ट फिचर समावेश थियो । यसमा हाइट एड्स्टेबल सिट र रिमोट फ्लिप टाइप जस्ता फिचर थियो । सो स्कुटरले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सकेन । जसले गर्दा कम्पनीले सो स्कुटरलाई बीएस ६ लागू भए पछि बन्द गरेको छ ।
यामाहाले गएको डिसेम्बरमा १२५ सीसीको स्कुटरलाई मात्र बीएस ६ मा अपग्रेड गर्ने घोषणा गरेको थियो । कम्पनीले फेसिनो, रे र रे जेडआर ११० सीसी इन्जिन बीएस ६ कम्प्लायन्ट १२५ सीसी पावरट्रेनको साथमा परिवर्तन गरेको छ । कम्पनीले यामाहा अल्फा बन्द गरेको छ ।
होन्डाले ल्यायो एलईडी हेडलाइट र थप फिचर सहितको एक्टिभा
भारतमा होन्डाले २०१८ होन्डा एक्टिभा १२५ लाई बजारमा उतारेको छ । यसमा एलईडी हेडलाइ...
सरकारी गाडी जलाउने पहिचान भइसके : प्रहरी
काठमाडौं – बानेश्वरमा शुक्रबार सरकारी गाडीमा आगो लगाउने एमाले समर्थित कार्यकर्ता...
रेसमाण्डु थ्री सम्पन्न : बिप्लक बने नेसनल च्याम्पियन
ट्रयाकमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर गुडाउने प्रतियोगिताको रुपमा चिनिएको रेसमाण्डुको ते...